Sajhasabal.com |नगरको सार्वजनिक सुनुवाइ: ५३१ योजना सम्पन्न, नगरवासी आक्रोशित
बैतडी जिल्लाको नाम कसरी रहन गयो ? के छ यहाँका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलको महत्व ?
Posted on: 25 Nov, 2018
मङ्सिर ९, बैतडी (रासस) | हरेक तीन/तीन महीनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भए पनि बैतडीको पाटन नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि आएपछि पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ शनिबार गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ५३१ वटा योजना बजेट विनियोजन गरेर सम्पन्न गरेको जनाइएको छ । ५१ नगरस्तरीय, ३३१ वडास्तरीय र १०३ वटा सशर्ततर्फका योजना सम्पन्न गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । गत आवमा नगरपालिकाले रु ४८ करोड ५९ लाख १२ हजार ७४ विनियोजन गरेको थियो ।
नगरपालिकाले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर ६८ वटा सडकसहित भौतिक पूर्वाधारतर्फ रु पाँच करोड १५ लाख बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । नगरपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइका सहभागीहरुले टुक्रे योजनाका कारण विकासको कामले गति नलिएको गुनासो गरेका छन् । धेरै ठाउँमा कार्यकर्तामुखी बजेट भएको समेत उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै नगरप्रमुख केशवबहादुर चन्दले कतिपय अधिकार अझै स्थानीय तहमा आउन नसकेकाले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
यस्तै गत आवको बजेटमा रु तीन करोड ३५ लाखभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । नगरपालिकाको बेरुजु रकमप्रति पनि सुनुवाइका सहभागीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । चालू आवमा नगरसभाले ४५० वटा योजना छनौट गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
नगरसभाले चालू आवमा रु ४६ करोड ६३ लाख १६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घले सहजीकरण गरेको थियो ।
ढिलो सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको भनी नागरिक आक्रोशित थिए । नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कुरा कागजमै सीमित भएको धेरैले गुनासो गरेका छन् ।
पाटन–६ का चमनकुमार भण्डारीले भन्नुभयो, “हाम्रो नगरपालिकामा प्रशस्त काम नागरिकलाई झुक्याउने तवरले भएका छन्, जनगुनासो बढी आउँछ भनेर नै आजसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ नभएको हो, आज भयो, यो पनि प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्ने तवरले भएको छ, नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछिको कामप्रति हामी नगरवासी सन्तुष्ट छैनौँ ।”
पाटन नगर कार्यपालिकाले बनाएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको पाटन–८ का हरिश बिष्टले बताउनुभयो । पाटन नगरपालिकाको आव २०७४/७५ को बजेटमा तीन करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु भएको पाइएको छ । रकम खर्च गर्दा अनियमितता भएको भन्दै यसप्रति पनि नागरिकले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले सरकारको नीतिका आधारमा हरेक तीन महीनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गरी नगरपालिकाका कामबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका थिए । विगतमा विभिन्न समस्या र व्यस्तताका कारण केही काम समयमै पूरा हुन नसके पनि आगामी दिनमा भने सबै कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्ने नगरप्रमुख केशवबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।